विकासमा किन पछाडि पर्यो माईपोखरी ? - नेपालबहस
विकासमा किन पछाडि पर्यो माईपोखरी ?
| १५:४५:२० मा प्रकाशित
२ फागुन,इलाम । प्रदेश नं १ को प्रमुख पर्यटकीय र धार्मिक क्षेत्र हो माईपोखरी । यहाँ घुमघाम र पूजापाठका लागि वार्षिक हजारौँ धर्मावलम्बी र पर्यटक पुग्छन् । आवश्यक प्रचार र पूर्वाधारको कमीका कारण भने कैयौँ सम्भावना भए पनि यो क्षेत्र छायाँमा परेको महसुस भएको छ ।
सरकारले १०० वटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको घोषणा गरी प्रर्वद्धन गर्ने निर्णय गरेको छ । यसरी छनोट गरिएका गन्तव्यमा इलामको माईपोखरी पनि परेको छ तर सरकारले जुन रुपमा पर्यटकीय गन्तव्यहरुको विकास गर्ने भनेको छ त्यस रुपमा यो क्षेत्रको विकास हुन भने सकेको छैन ।
नेपाल पर्यटन बोर्ड, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारबाट सिफारिस गरी यी गन्तव्य छनोट गरिएको हो । नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका लागि ६०० भन्दाबढी स्थान प्रस्तावित थिए । त्यसमध्ये कुन गन्तव्यलाई १०० वटाभित्र समेटेर प्रर्वद्धन गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालयले विभिन्न आधार तय गरेको थियो ।
मन्त्रालयकाका अनुसार नयाँ छनोट भएका भएका पर्यटकीय गन्तव्यहरु निजी क्षेत्र, स्थानीय सरकार र स्थानीयवासीको पनि सहयोगमा पर्यटनको पूर्वाधार निर्माण गरी घुम्नयोग्य बनाइने छ । सम्भावना भएर पनि ओझेलमा परेका यस्ता गन्तव्यलाई अब विशेष रुपमा विकास, प्रचार, प्रसार र संरक्षण गरिने सरकारको नीति छ । ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी नयाँ गन्तव्यको प्रर्वद्धन गर्ने योजना बनाइएको थियो ।
यी पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा प्रदेश नं १ सरकारले निर्णय गरेकै वर्षबाट बजेट पनि निकासा गरिएको थियो । यसका लागि सरकारले नयाँ गन्तव्य प्रर्वद्धन गर्न रु ५० करोड विनियोजन गरेको थियो । यस गन्तव्यभित्र सूचीकृत इलामको माइपोखरीमा जिल्लाभित्र मात्र नभई जिल्ला बाहिर र भारतबाट समेत पर्यटकहरु घुम्न आउँछन् । हालसम्म यहाँ पक्की सडक भने पुगेको छैन । यसैले धेरै यात्रुहरु पैदल वा कच्ची सडकमार्फत् सवारीमा यहाँ आउनुपर्छ । कच्ची सडकमा सीमित सवारी मात्र गुड्ने भएकाले धेरै पर्यटकको यहाँ आउने उद्देश्य सपना मात्र हुन्छ । माईपोखरी पु¥याउन पक्की सडक निर्माण शुरु नगरिएको पनि होइन । पाँच वर्षअघिबाटै सडक निर्माण शुरु गरिएको छ तर हालसम्म आधा पनि पक्की भएको छैन । वर्षमा दुई किलोमिटरभन्दा बढी पक्की नहुने कारणले पनि अझै सडक पक्की हुन लामो समय लाग्ने देखिन्छ ।
माईपोखरी इलाम जिल्लाको उत्तरी क्षेत्रमा रहेका सन्दकपुर गाउँपालिकास्थित माइपोखरी र सुलुबुङको बीचमा पर्छ । एक दशमलब ८८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको यस पोखरीको अर्धव्यास ७५० मिटर छ । मेची राजमार्गको बिब्ल्याँटे बजारबाट करीब १२ दशमलव पाँच किलोमिटरको दूरीमा पर्छ । इलाम सदरमुकामबाट १५ किमी उत्तर समुद्र सतहदेखि दुई हजार १३० मिटरको उचाइमा रहेको छ । पैदल जाँदा इलाम–बिब्ल्याटे–जसबिरे हुँदै करीब तीन घण्टामा पुग्न सकिन्छ ।
सडक सार्न सकश देखिएको छ । जग्गाको किचलोका कारण सडक सार्न लामो समय लाग्ने देखिन्छ । स्थानीयवासीको असन्तुष्टिका कारण सडकको डिपिआर बन्न सकेको छैन । यसैले पनि माईपोखरीमा पक्की सडक पुग्न लामो समय लाग्ने देखिन्छ । यता सन्दकपुर गाउँपालिकाका प्रवक्ता गिरिराज खनालले भने केही समयमै सडक निर्माण गरेर पक्की गरिने बताउछन् ।
माईपोखरी जैविक हिसाबले पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । यहाँ लौठ सल्ला, सुनाखरी, गलैँचे झ्याउ जस्ता बहुमूल्य औषधिय गुण भएका वनस्पति पाइन्छन् । सलक्क बढेका रुख हेर्दा कलमी गरेर मिलाए जस्तो देखिन्छ । वनस्पतिको सुगन्ध, वनको शीतल र चराचुरुङ्गीको चिरबिर सुन्दै जङ्गल सफारी गर्दा बेग्लै आनन्द हुन्छ । स्थानीय युवराज पीसीका अनुसार यस क्षेत्रमा २०० प्रजातिका फूल फुल्ने बिरुवा छन् । तीन प्रजातिका चाँप, चार थरी गुराँस र ६२ थरीका जडीबुटी पत्ता लागेको छ ।
विसं २०५९ मा उत्तरी क्षेत्रको विकास र पर्यटन विकासको योजना बनाइएको थियो । यहाँ रक गार्डेन, चिमाल प्रजनन् अनुसन्धान, जडीबुटी प्रदर्शनी प्लट, लौठसल्ला प्लट, अर्किड उद्यान, जडीबुटीका बिरुवा उत्पादन, डोमेस्टिकेसन तथा जर्मप्लाजम, शोभनीय बगैंचा जस्ता संरचना बनेका छन् । केही वर्षअघि माईपोखरी सुकेको बताइए पनि त्यसयता बढेर झनै मनमोहक भएको छ । कोरोना महामारीपछि भने माईपोखरीमा पानीको सतह अझै बढेको माईपोखरी मन्दिरका पुजारी तुलाराम पौडेलको भनाइ छ ।
माईपोखरीलाई मात्र नभई अन्य पर्यटकीय क्षेत्रलाई समेत समेटेर काम गर्न लागेको पर्यटन व्यावसायीले बताएका छन् । माईपोखरीसँगै छिन्टापु र सन्दकपुरको एकीकृत विकासमा काम गर्दा पर्यटक बढ्ने अनुमान रहेको पर्यटनकर्मी देवी पौड्यालले बताएका छन् । सबै क्षेत्रलाई विकास गर्न ‘प्याकेज’कार्यक्रम ल्याउँदा एक ठाउँमा पुगेका पर्यटक अन्यन्त्र पुग्ने अनुमान रहेको पौड्यालको भनाइ छ । माईपोखरीसँगै रहेको माईपातालमा समेत गाउँपालिकाकै लगानीमा ‘रेडपाण्डा बिल्डिङ क्षेत्र’ बनाइएको छ ।
अन्य क्षेत्रजस्तै कोरोना भाइरसको महामारीबाट माईपोखरी पनि प्रभावित बन्यो । दैनिक २० देखि ३० जनाको हाराहारीमा पर्यटक पुग्ने यस क्षेत्रमा कोरोनापछि नगण्य मात्रामा मात्र पर्यटक पुग्न थालेका छन् । त्यसमा पनि लामो समय त यहाँका व्यावसायीले व्यापार बन्द गर्नुप¥यो । विस्तारै जुर्मराउँदै आएपनि अपेक्षाकृत पर्यटक नआउँदा घाटा व्यहोर्नु परेको व्यावसायी निमादोर्जे शेर्पा बताउछन् ।
मुख्य याममा पनि पर्यटक नआउँदा आर्थिक कारोवार ठप्प भएको यहाँका व्यावसायी शेर्पाको दुःखेसो छ । “हामीले खोलेर मात्रै पनि भएन । पर्यटक आउनुप¥यो”, शेर्पाले भने, । आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको चापाचाप हुने यो क्षेत्रमा यस पटक भने व्यावसायी नमज्जाले घाटा व्यहोर्नु परेको छ । यस्तै सरकारी क्षेत्रको आँखा नपुग्दा पनि माईपोखरी पछि परेको शेर्पाको बुझाई छ ।
यता गाउँपालिकाले भने यस क्षेत्रका पुराना रुख हटाएर नयाँ किसिमका वनस्पति रोप्न शुरु गरेको बताएको छ । यहाँका सल्ला र कटुसले पानीको सतह घटाउँदै लगेको भन्दै गाउँपालिकाले यस ठाउँमा सदावहार हरियाली राख्ने वनस्पति रोप्ने तयारीमा लागेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता खनालले बताएका छन् ।
होटल व्यावसायी शेर्पाले भने केही समयमा नै यी समस्या पनि हल हुने बताएका छन् । अझैपनि माईपोखरीलाई धार्मिक रूपमा मात्र हेरिने कारणले अन्य क्षेत्र गुमनाम भएका छन् । जैविक पक्षमा कसैको ध्यान गएको छैन । विश्वमै लोपोन्मुख वन्यजन्तु पाइने भएपनि यतातर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । गाउँपालिकाका प्रवक्ता खनालले यसका लागि पछिल्लो समय पर्यटन वोर्डसँगको समन्वयमा काम भइरहेको बताए ।
फेब्रुअरीमा पर्यटक आगमनमा झिनो सुधार ७ दिन पहिले
सोमपालले हिर्काए ३७ बलमै अर्धशतक, महंगा रहे सन्दीप १४ घण्टा पहिले
बाँझो जग्गामा कागती खेती गर्दै युवा ६ दिन पहिले
चार वर्षमा पनि सकिएन नक्खु–बुङमती सडकको काम ७ दिन पहिले
राष्ट्रिय सभागृहमा सुरक्षा व्यवस्था कडा ४ दिन पहिले
अहिले चोचोमोचो मिलाएर कांग्रेस सरकारमा जानु हुँदैन : नेता पौडेल ६ दिन पहिले
नेपाली बजारमा आज पनि सुनको मूल्यमा गिरावट ३ हप्ता पहिले
विनयजङ्ग बस्नेतविरुद्ध सपनाले दिइन उजुरी ३ हप्ता पहिले
उपत्यकावासीलाई खुसीको खबर, आज मेलम्ची पानी राजधानी आउँदै ! ३ दिन पहिले
‘रेमिट्यान्स दुरुपयोग’ले बढाउँदै सम्बन्धविच्छेद ५ दिन पहिले
राप्रपाको प्रस्ताव : राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रबारे सर्वदलीय बैठकमा पेश ३ महिना पहिले
सिमाका भन्सार कार्यालयमा प्रभुकाे एक्स्टेन्सन काउण्टर थप समयका लागि सञ्चालनमा रहने ३ महिना पहिले
कमल पोखरी विस्तारका क्रममा भत्काइए संरचना १ महिना पहिले